NgoLwesithathu, ngoMashi 24, 2010 NgoMgqibelo, Juni 27, 2015 UScott Hardigree
Kuvame ukukhulunywa kabi futhi kuvame ukuqondwa kabi, uhlu lokuqashwa kwama-imeyili kuwumkhuba wokumaketha owamukelwa kabanzi onganikeza i-ROI enamandla, uma wazi ukuthi yini okufanele uyibheke futhi uyihloniphe ibhokisi lokungenayo. Uma ungajwayele noma ungathandeki ngokuqasha uhlu lwe-imeyili nakhu ukwehla kwezinzuzo kanye nezinto ezibalulekile ezahlukanisa nokucatshangelwa.
Ngeshwa amathuba okuqashwa we-imeyili asemthethweni angcoliswe imikhuba yabahlinzeki abangaphansi kwe-stellar kungaba ukuthi babala abahlanganisi, abathengisi bamakheli e-imeyili, noma abaqambimanga ababhekene nempandla. Akukho okungahle kusize i-ROI yomthengisi. Kungani kufanele? Abamukeli be-imeyili abanabo ubudlelwano nenhlangano enamakheli abo e-imeyili, futhi bathumela umnikelo wakho.
Eminyakeni yami eyi-12 ekumaketheni nge-imeyili ngithole ukuthi amathuba amahle kakhulu ahlala ekuqashiseni weqiniso uhlu lwababhalisile. Lokho, uhlu lwe-imeyili olunophawu olususelwa kokushicilelwe, amasevisi, noma imikhiqizo umamukeli ayaziyo, namanani.
Isebenza kanjani Ukucatshangelwa Okusemqoka
Abanikazi bohlu bazothumela okunikezwayo ngumthengisi kubabhalisi babo.
Umakethe ukhokha imali ngale nsizakalo, imvamisa ngezindleko eziyinkulungwane (CPM).
Ngokungafani neposi eliqondile noma ukuthengisa ngocingo, umakhethi akaluboni uhlu.
Ngokungafani nokumaketha okungenayo, kumayelana nokukhiqiza okunikezwayo okubalulekile, hhayi okuqukethwe.
Ukukhethwa kohlu kuyinto ebaluleke kakhulu, kulandelwa okunikezwayo nobuciko.
Kwabaningi abathengisi bohlu lwama-imeyili abaqashi kuyindlela engaguquguquki yokukhulisa uhlu lwabo ababhalisile, ukupakisha amapayipi abo futhi, nokwenza ukuthengisa ngqo. Nazi izinzuzo ezimbalwa.
Inani Lenhlangano (nomnikazi wohlu)
Izindleko Eziphansi Zokutholwa (qhathanisa nezinye iziteshi eziqondile)
Kuyashesha (imiphumela yokuhlola bese wenza ukulungisa ezinsukwini, hhayi emasontweni)
Ukulethwa Okungcono (Uma kuqhathaniswa nohlu oluhanjelwayo noluthengwayo)
Abanikazi bezinhlu bafika ezinambithekweni eziningi ezifana nabathengisi, abakhiqizi bemicimbi, izinhlangano, abashicileli bendabuko, nama-blogger. Konke okungathola inani elibonakalayo ekuqashisweni kohlu lwe-imeyili nakho, noma ngabe kuhlukile.
Imali engenayo ($ 1-2 ngomuntu obhalisile, ngonyaka umthetho omuhle wesithupha)
Ukulawula (ini, nini, ubani)
Kulula (akukho ukuthengisa, ukumaketha, ukukhokha - uma usebenza ne- Inkampani Elawula Uhlu Lobungcweti).
Inhlanzeko (ukhula lukhula kanzima njalo)
Ukudlulela ngalé kokukhetha uhlu olufanele, abathengisi abahlakaniphile abasathathi i- thenga izinto zami indlela. Esikhundleni salokho uhlu lwemikhankaso yokuqasha luya ngokudala ngokwengeziwe, bheka lo mkhankaso kusuka kuSurfline nakuRip Curl. Kuyisibonelo esihle sokuthi abashicileli banganikeza kanjani ababhalisile babo imikhiqizo yokuncoma yokufinyelela ngqo, izinsizakalo, noma okunikezwayo, futhi bazuze izinhliziyo zabo kule nqubo.
Ikusasa Lokuqashwa Kwe-imeyili
Ukulethwa kwe-imeyili kuyinselelo eqhubekayo yabathengisi bohlu abasebenzisa uhlu olutholwayo noma oluthengiwe. Empeleni, Inselele mhlawumbe ukukhanya okuncane kakhulu kwencazelo. Futhi lokho kuyinto enhle. Kukhulula amabhokisi eposi kubakhangisi abafuna ukukhomba okunikezwayo kwabo kwababhalisile abasemthethweni abakhombise intshisekelo futhi abangaba nesidingo ngesikhathi esifanele, noma bathole inani langempela kuleli thuba.
Tags: uhlu lwe-imeyliuhlu lokuqashwa kwama-imeyiliUhluuhlu lokuqashwa
Mar 25, 2010 ku-10: 46 AM
Siyabonga uScott ngemininingwane ebaluleke kangako ekukhangisweni kwe-imeyili. Ngithole lesi sihloko sijabulisa kakhulu lezo zinkampani ezisanda kuqala ezinomkhiqizo omuhle kepha hhayi uhlu olufanele lwamakhasimende akhethe ukuba lapho.
Ngicabanga ukuthi kunganikeza lelo bhizinisi izinzuzo eziningi, enye yazo, ukuhlotshaniswa nebhizinisi lomnikazi wohlu. Ngakho-ke qiniseka ukuthi ibhizinisi linegama elihle phakathi kwamakhasimende abo ngoba uma kungenjalo lokho kuzomane kubulale umkhiqizo wakho esikhundleni sokuwasebenzisa.
Joyina izingxoxo ezimayelana nokumaketha nge-imeyili ku-QQQAQ.com nezimpendulo
Ngo-Apr 25, i-2016 ku-2: i-56 PM
Yini igama le-Ejensi Yokuqasha Nge-imeyili. Nginohlu lwababhalisile abangaphezu kwe-1mill + futhi ngithanda ukuqasha uhlu lwami noma ngiluthengise. Ngabe ukhona ongancoma inkampani ezokwenza lokho?